जीवन दर्शन - जीवनका लागि खुराक
जीवनका लागि खुराक
जिबनमा कसैलाई पनि बताउन नमिल्ने ४ कुरा
April 13, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
पूर्वीय दर्शनका नीति शास्त्री चाणक्यले जीवनमा गर्न हुने र नहुनेकुरा अर्थात नीतिबारे चर्चा गरेका छन् । नीति पालना गरे जीवनमा सुख प्राप्ती हुने बताइन्छ । चाणक्यले यस्ता ४ कुरा बताएका छन् जुन जीवनमा कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन अर्थात सँधै यी ४ कुराको राज आफूसँगै हुनु पर्छ । अर्थनाशं मनस्तापं गृहिणीचरितानि च।नीचवाक्यं चाऽपमानं मतिमान्न प्रकाशयेत्।।यो श्लोकमा […]
Filed Under: समसामयिक जानकारी Tagged With: Seperate
March 13, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
-डा. मनोज भट्टराई के तपाई पर्याप्त निन्द्राबाट बञ्चित हुनुहुन्छ ? मध्यरातमा बिउँझेर चिन्तित मुद्रामा घडीको सुईले टिक–टिक गरेको हेरेर बस्नुभएको छ ? तपाईंलाई निन्द्रा पुगेको छैन? अफिसमा छिर्नेबित्तिकै १० मिनेट यसो निदाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? अवश्य पनि तपाईं एक्लै हुनुुहुन्न र आशा मरिसकेको छैन । हामी राम्रोसँग सुत्न चाहन्छौं, तथापि धेरैलाई गा¥हो हुन्छ […]
Filed Under: स्वास्थ्य Tagged With: Healthy Tips
ज्यानै जानसक्ने प्लाष्टिक चामल वजारमा, यसरी चिन्न सकिन्छ प्लाष्टिक चामल । सक्दो शेयर गरौं ।
March 11, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
आजकाल तपाईंले बजारमा नक्कली अर्थात् प्लाष्टिकको चामल आइरहेको बारे समाचारमा सुन्नुभएको होला जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने गर्दछ । जब तपाईंले नक्कली चामल देख्नुहुन्छ तब हेरेर नै उक्त चामल नक्कली हो कि सक्कली भन्ने बारे छुट्याउन सक्नुहुन्न । खबर साँचो हो वा झुटो प्लाष्टिकको चामलबाट टाढा हुनु नै राम्रो हो किनभने यसले गम्भीर पाचन […]
Filed Under: समसामयिक जानकारी Tagged With: chamal, plastic
विनोद चौधरीको सम्पत्ति २० अर्बले बढ्यो, यी हुन् विश्वका १० धनाढ्य ! (सूचीसहित)
March 8, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
काठमाडौं – नेपालका एक मात्र खर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्तिमा २० अर्बले वृद्धि भएको छ । विश्वभरीका खर्बपतिको सुची सार्वजनिक गर्दै आएको फोब्र्स म्यागेजिनले २०१८ को मार्च ६ सम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै चौधरीको सम्पत्ति बढेको जनाएको हो । फोब्र्सका अनुसार एक वर्षको अवधिमा चौधरीले करिब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष १ दशमलब […]
Filed Under: समसामयिक जानकारी Tagged With: binod chaudhary
राम्रो सेल्फी कसरी खिच्ने? ४ उपाय जान्नुहोस् ||
February 25, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
यदि तपार्इं सेल्फीको सोखिन हुनुहुन्छ भने यसका लागि केही एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसको माध्यमबाट तपाईंको सुन्दर सेल्फी खिँच्ने सपना पूरा हुनसक्छ। प्रिज्मा (आइओएस र एन्ड्रोइड) सेल्फीमा फरक–फरक इफेक्टका लागि प्रिज्मा सबैभन्दा उपयोगी एप हो। यो फोटो सम्पादन एप सबैभन्दा पहिले आइओएस प्रणालीका लागि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। छोटो अवधिमा निकै चर्चामा आएपछि एन्ड्रोइड प्रणालीमा […]
Filed Under: समसामयिक जानकारी Tagged With: selfie
यी राशि भएका युवाहरुले पाउँछन् सुन्दरी श्रीमती ,कुन हो तपाईको राशि ?
February 17, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
जान्नुहोस् कुन राशिका पुरुषको पत्नी खुसी रहन्छन् : १) कन्या राशिका व्यक्ति ह्याण्डसम देखिन्छन् । जो सुकै केटी यस्ता केटालाई पतिकोरुपमा पाउन चाहान्छन् । यो राशिका व्यक्ति आफ्नी पत्नीलाई धेरै माया गर्छन् । २) सिंह राशिका व्यक्तिसँग केटीहरु आकार्षित हुन्छन् । यो राशि भएका पुरुषले सुन्दर पत्नी भेट्छन् । यीनीहरु आफ्नो साथीसँग धेरै वफदार रहन्छन् […]
Filed Under: समसामयिक जानकारी Tagged With: Boys/Girls Tpis
​दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ !
February 11, 2018 by जीवन दर्शन LeaveaComment
दही स्वादिलो पेय । दही गुणकारी पनि । दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ । दहीको अर्युवेदिक महत्व छ । यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र […]